Yeyiphi eyona Injini yokuThengisa efanelekileyo? | Martech Zone
Yeyiphi eyona Injini yokuThengisa efanelekileyo?
NgoLwesine, uJuni 14, 2012 NgoLwesine, uJuni 14, 2012 U-Andrew Davis
Isicwangciso seCPC siqulunqe idatha evela kubathengisi abangaphezulu kwe-100 kwi-intanethi ngobukhulu obahlukeneyo, malunga ne-4.2 yezigidi zonqakrazo kunye nezigidi ezisi-8 kwingeniso ukumisela ezona njineli zokuthelekisa zilungileyo kwi-Intanethi.
Ukuthelekisa iinjini zokuthenga kubandakanya iwebhusayithi ezinje nge-Pricegrabber, i-Nextag, iiNtengiso zeMveliso zeAmazon, Shopping.com, Shopzilla kunye noGoogle Shopping.
Kwisifundo sihlalutya ezona ndawo zithengisayo ze-ecommerce yomrhwebi, ingeniso, inqanaba lokuguqula, indleko zentengiso, kunye neendleko ngexabiso lokucofa, kwaye zizonke ukufumanisa intshatsheli yobunzima be-CSE.
Apha ngezantsi kukho isishwankathelo seNgxelo yeeNdawo zokuThengwa eziBalaseleyo kwi2012:
Ii-CSEs eziphezulu ze-10
# 1: Uphendlo lweMveliso kaGoogle (Kungekudala iza kuthengwa nguGoogle-KUHLAWULWE-ulwazi oluthe kratya kuloo nto Apha)*
Ukuthenga kuGoogle yeyona ndawo iphambili yokulawula i-CSE yazo zombini i-Q1 2011 kunye ne-Q1 2012, kwaye ibilithuba elithile. Nangona i-Shopzilla ibetha uGoogle kuyo yonke i-traffic ngo-2011, kunye neeNtengiso zeMveliso zeAmazon zikhuphe indlela yazo ukuya kwindawo ephezulu yowama-2012, uGoogle uhlala esenza isixa esikhulu sezithuthi, kwaye ilawulwa kuzo zombini iikota zengeniso iyonke.
I-Nextag yazisa indawo yesibini ekhaya kumgangatho we-CSE wonke kunyaka wesibini ngokulandelelana kwaye ikhuselekile kwindawo ephezulu phakathi kweendawo zokuthenga ezihlawulelweyo zika-2012. Ngelixa ukugcwala kwe-Nextag ngokubanzi kwehlile ukusuka kunyaka ophelileyo, iseyeyona injini yesibini yokuqhuba ingeniso ( emva koGoogle), ngo-2011 nango-2012. I-Nextag iphinde yaphucuka ngokubonakalayo malunga neenguqulelo kunye neendleko ngonqakrazo ngalunye (CPC) ama-2012.
# 3: Ixabiso leGrabber
Ngelixa i-Shopzilla ithathe indawo ephezulu ye-injini ngo-2011, i-Pricegrabber ikhuphe i-injini kwi-Q1 2012. Nangona amaxabiso e-COS kunye ne-CPC ehla ngexabiso, ukugcwala kunye nengeniso ziye zahlala zingahlali macala omabini.
IiSayithi eziGuqukayo eziPhezulu
# 1: Uphendlo lweMveliso zikaGoogle
Uphendlo lweMveliso kuGoogle yayiyinjini yesibini evelisa ukugcwala kwabantu ngo-2012, kwaye ingoyena mthombo mkhulu wabarhwebi. Ngenxa yoko, kuwo omabini ama-2011 kunye no-2012, uGoogle wagoduka negolide yeNqanaba lokuGuqula kwizinga lethu.
Kanye ngasemva kuGoogle kwingeniso, i-Nextag yeyesibini injini eguqukayo kubarhwebi ngo-2012.
Nangona iyinjini encinci, iPronto ipakisha inqindi eyomeleleyo yotshintsho kubarhwebi, isondeza iinjini ezi-3 eziphezulu ngenqanaba lokuguqula.
Eyona Ndleko yokuThengisa (COS) Iindawo
# 1: Ixabiso leGrabber
Ukulandela ii-CSEs zasimahla, i-Pricegrabber yafumana eyona ndawo iphambili ye-injini ezilungileyo kwixabiso lentengiso (i-COS). Ikwaphakathi kweinjini ezaye zehla kwi-COS iyonke ukusuka ngo-2011 ukuya ku-2012.
Nangona i-Nextag's COS inyuke ngo-2012, iseyeyona ndlela iphambili kukukhetha iinjini zeCOS.
# 3: Ivenkile.com
Ukujikeleza uluhlu, iVenkile.com ibethe iintengiso zeAmazon zeentengiso ze-COS zesithathu ezisezantsi.
Ukuhambisa kunye neeShakers zango-2012
Ivenkile.com ibump indlela yayo yaya kwindawo yesine ye-enjini ye-injini ngo-2012, ngaphambili yayiyeyesithandathu.
Kungekudala isuka kwindawo yokugqibela kuluhlu olupheleleyo ukuya kwindawo yesi-7 ngo-2012.
Injini yokuKhangela: Iintengiso zeMveliso zeAmazon
Iintengiso zeMveliso yeAmazon yenye yee-CSEs ezintsha phaya ngoko ke ibona ukukhula kakhulu kule minyaka idlulileyo. I-Q1 2012 ibone ukonyuka okubonakalayo kwetrafikhi yeeNtengiso zeMveliso zeAmazon, kunye nokugquma kwengeniso. Nangona izinga lokuguqulwa kweeNtengiso zeMveliso zeAmazon lehlile ukusuka kwi-Q1 2011 ukuya kwi-Q1 2012, ukungena kwabarhwebi kuluhlu kule nkqubo, ukonyusa ukhuphiswano omnye komnye yeyona nto ingunobangela wokuhla kweenguqulelo.
* Uphendlo lweMveliso kuGoogle luya kuthengwa ngokusemthethweni kuGoogle ngo-Okthobha, funda ukuba uzilungiselela njani apha.
Cofa eli khonkco lilandelayo ukujonga isifundo esipheleleyo kwifayile ye eyona ndawo yokuthelekisa.
I-Alteryx: Ubukrelekrele kweShishini kunye noHlahlelo lobuChule
U-Muhammad Ahsan Dar
Epreli 3, 2014 ngo-3: 49 PM
Zeziphi izizathu eziphambili zokuwa kwe-shopzilla?
Kuya kuba kuhle ukuba ungabhala inqaku elifanayo malunga ne-Enjini yokukhangela entsha kunye nezayo yokuthelekisa. Zimbini endizisebenzisa rhoqo zezi http://www.slycut.com kwaye http://www.price zombie.com kwaye zibonelela ngeentengo ezingabizi okanye iziphumo ezinomdla ngakumbi kwintengiso yesintu.